​के तपाई राति मोबाइल चलाउनुहुन्छ ? आजै देखि छोडिदिनुहोस् - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»​के तपाई राति मोबाइल चलाउनुहुन्छ ? आजै देखि छोडिदिनुहोस्
​के तपाई राति मोबाइल चलाउनुहुन्छ ? आजै देखि छोडिदिनुहोस्
By रिता घिसिंग on १९ भाद्र २०७५, मंगलवार ०७:१२ स्वास्थ्य/जीवनशैली
एजेन्सी : के तपाई रातको समयमा स्मार्टफोन तथा कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ ? यदि चलाउनु हुन्छ भने आजै देखि छोडिदिनुहोस् । किनभने यसरी तपार्इंले अध्यारोमा स्मार्टफोन तथा कम्प्युटर चलाउँदा स्क्रिनबाट निलो प्रकाश निस्किने गर्छ जसले तपाईको आँखालाई असर गर्छ ।
अँध्यारोमा लामो समयसम्म यस्तो निलो प्रकाशको सम्पर्कमा रहिरहने मानिसको आँखाको ज्योति गुम्नसक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
मोबाइल तथा ग्याजेटको अत्यधिक प्रयोग गर्ने अमेरिका लगायतका मुलुकमा निलो प्रकाशबाट हुने अन्धोपनका घटनामा पछिल्लो समयमा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको शोधकर्ताहरुले जनाएका छन् ।